Ukuqonda i-Figure Skating Blades
Eli nqaku liphendula imibuzo eqhelekileyo malunga namacwecwe okukhwela.
Yintoni eyenza amaqabunga e-ice skating ahambe phezu kweqhwa?
Xa i-ice skate blade icinezela kwiqhwa, ifilimu emancinci yamanzi iyadalwa kwaye iyancibilikisa iqhwa. Oku kufana ne-lubricant kwaye ivumela iqela ukuba lidibene.
Uluphi umehluko phakathi kwekhasi lebhokisi le-hockey kunye nomdwebo wokubhinqa?
Isalathisi sokubhinqa sinemikhono yeeyonto ephezulu kwaye idla ixesha elide kwaye likhulu kunelo hockey.
Uninzi lwexesha, umgca we-skate blade uhlelwe ngokwahlukileyo kwi-boot skate boot, kodwa i- hockey skate blades ikhonjiswe phantsi kwebhokisi ze-hockey.
Bobabini imifanekiso yokukhwela kunye nee-hockey zamanzi ziphakanyiselwe kwisiqalo ngendlela efanayo, kodwa iiflothi zisetyenziselwa iHockey kunye neentambo zisetyenziselwa ukukhwela.
Ziziphi ezinye zeentlobo ezithandwa kakhulu kwiindawo zokubhabisa?
Abaninzi abaphakathi, abaphambili, nabalingani be-skaters skate kwiPateni engu-99 yomtya owenziwe nguJohn Wilson. Amanye amajelo adumile yiYohn Wilson's Gold Seal kunye neM Ph's Phantom. Abaninzi bokuqala be-skaters skate skate kwimodeli yobugcisa beMK.
Kwiminyaka yakutshanje, iJackson Ultima kunye neRedell 's Eclipse blade ziye zaziwa kakhulu. I-Eclipse Infinity blade iyafana kakhulu nePateni engu-99 kodwa iindleko ezingaphantsi.
I-Paramount Sk8s Inc. yenza iinguqu ezincinci zamacandelo aneeprofayili ezifanayo njenge-Pattern 99s, i-Gold Seals, ne-Phantoms.
Abadansi beqhwala kunye nabadlali be- skaters basebenzisane basebenzise isithende esifutshane. Umsila we-blade unceda ukuxhoma ukuxhoma komhlaba, ngoko umda wokudanisa awuyiyo into enhle yokukhetha i-skaters enye.
Ukuba i-blade inamaphuzu amakhulu, ithetha ukuba bhetele?
Iingcamango zokuba iinqununu ezinkulu zihamba phambili kwiindawo zokukhwela eziphezulu eziphezulu kunye neenqwanqa ezincinci zincinci zilungele ukuqala i-ice skaters ayizichanekanga ngokupheleleyo.
Okubaluleke ngokwenene yiphambano langaphambili lomtya apho i-ice skaters ihluma khona , igxuma kunye nomhlaba .
Umzekelo, ii-John Wilson ze-Gold Seal blade zineenkwenkwezi ezincane, kodwa amaninzi amaninzi akwi-skaters ahamba ngokuphindaphindiweyo kathathu ngexesha lokukhwela kwi-Gold Seal blades. I-Gold Seal blades okanye amacandelo aneprofayili efanayo ne-Gold Seal blade, njenge-440SS 12 '' iTapered Paramount Blade okanye i-420SS 12 '' iTapered Paramount Blade iya kusebenza kwii-skaters zamazinga ahlukeneyo.
Ziziphi izinto ezisetyenziselwa ukwenza i-skate blade blade?
Umzobo wengubo yesikhephe ngokuqhelekileyo yenziwa nge-carbon steel tempered eyokuqala ukuphathwa ngoshushu. Iibhanti ziboshwe nge-high quality chrome. Kwiminyaka yakutshanje, i-aluminium elula kunye nezintsimbi ze-stainless steel ziye zithandwa. Iibhanki zensimbi zeCarbon zincinci kuneenkunkuma zensimbi ezingenasici. Amagqabi aphezulu, afana nePateni 99 kunye ne-Gold Seal blade, eyenziwa ngebakala elingcono kunezinyithi kunamathotho angabizi.
Ama-Wilson ayenziwe yenziwe nge-Sheffield yensimbi, eyayiyinye yezona ziphathe ezilungileyo kwihlabathi kuma-1940. Ngaphezulu kweminyaka, izinto ezintsha kunye nezokwimanje zamanqwanqwa okukhwabanisa ayenzelwe kwaye zenziwe.
Ngokungafani neentlobo ezininzi zokukhwela, ezenziwe kwi-carbon steel, i-paramount blades zenziwe kwi-aluminum e-aluminium extrusion ne-stainless steel runner.
Ezi zinto zomelele kune-carbon steel kwaye zenza i-blade ephezulu efunekayo ukuba ibukhali ngaphantsi kunezinye izikwere zokukhwela.
Kutheni i-skaters ehamba phambili ithenga amaxabiso axabisekileyo?
Iindleko ezincinci zivame ukuba zenziwe ngezinga eliphezulu lensimbi evumela ukuba i-skaters ibambe ixesha elide. Kwakhona, iindleko ezibiza kakhulu azidingeki ukuba zibukhali ngokuphindaphindiweyo njengamaqhosha aphantsi. Iindleko ezincinci zigeleza kwiqhwa elincinci elingahle liphucule kwaye lihlambe.
Ngaba ii-high-end blades ezithengayo zenza ama-skaters angcono?
Iindleko ezincinci azenzi i-skaters bhetele. Umzobo wee-skaters kufuneka uthenge amacandelo ahambelana nezinga labo lokukhwela.
Ingcamango yokuba umzobo wokuqala we-skater akufanele uthenge amaxabiso abizayo ayilunganga. Ukuba i-skater ineemali, unokuthenga ii-blade ezibiza xa ekhethayo.
Kukho ulwahlulo oluncinci phakathi kwamabala. Ukhetho olukhulu lwezontwane lungaba ngumphambili omkhulu.
Ziyintoni na amagama afana ne-edge, rocker, kunye ne-hollow?
Zonke iindawo zokuqhankqalaza zeqhwa zingaphandle kwamaphethelo nangaphakathi. Umngcipheko ongaphandle kwesikratshi ngumngcipheko ongaphandle, kwaye umda ongaphakathi ngaphakathi kwesikhanksi singaphakathi. Ngokomzekelo, icala langasobunxele langaphandle libhekise kwicala lasekhohlo lomtya. Icala lasekunene lesalathini sangasesigxina singaphakathi. Kwinqanaba elisekunene, icala langasobunxele lomtya ngumda wangaphakathi.
Ummandla ophakathi kwamacangca amabini ezantsi kwelayini ubizwa ngokuba ngumgodi.
Xa ukhangela iqela ukusuka kwicala, kuyacaca ukuba ama-blade ye-skate ayikho cwecwe, kodwa ivalwe. Amacangca (iindlovu) ahlukeneyo ngobude ngokuxhomekeke kwimiba nganye. Indlela indlela iqhekeza egobile ngayo inefuthe kwindlela i-blade ivakalelwa ngayo kwi-skater. Umtya omncinci (i-radius okanye i-rocker) ivumela i-skaters ukuba yenze imida engaphezulu. Abaqalayo bavame ukukhwela ngamacangca amancinci; Izithuba ze-skaters eziphambili zivame ukukhwela kwiindawo ezinkulu ezinamaphiko, kodwa akunjalo.
Zingaphi kangangoko kufuneka zifake izixhobo zokukhawulela?
Zingaphi iikhredithi zokubaluleka zifuna ukuphuculwa ziya kuxhomekeka ekubeni zininzi izikhwama ze-skater kunye nokuba nzima kangakanani. Ngamanye amaxesha iziganeko azive ziziva zikhuselekile kwaye i-skater iza kukwazi ukuba iilaphu zivakalelwa njani.
I-Kayak Gear ne-Equipment Essential
Yintoni enokuyenza Xa i-Dal Segno ibonakala kwiShishini loMculo?
I-Oglala Lakota College Admissions